Baadhitaanka joogtada ah ee Ururka Qaranka ee Cilmi-baarista Beeraha wuxuu ka caawiyaa soo saaridda noocyo badan oo digir ah, abuurista qiyaastii 929,000 metrik ton oo digir ah sanadkii. Dhibcaha Sawirka: Charlotte Kemigyisha, NARO
Qeybta:Dayactir Saddex-bilood ah7 min akhris
Nidaamyada cuntadu waxay si aad ah ugu xidhan yihiin isbeddelka cimilada iyo sinnaanta. Nidaamyada cuntada ee caafimaad qaba, waara waxay caawiyaan yareynta isbedelka cimilada; isbedelka cimilada wuxuu saameeyaa awooddeenna aan ku taageerno nidaamyada cuntada ee caafimaad qaba; iyo nidaamyada raashinka caafimaad qaba waxay sare u qaadaan sugnaanta cunno, nafaqada, iyo hab-nololeedyada. Waxaan u baahanahay dhul caafimaad qaba, hawo, biyo, iyo cunno dadka iyo meeraha si ay u koraan.
Saddexdii bilood ee ugu horreeyay 2020 deeq-lacageedka, Hay'ada 'McKnight Foundation' waxay ku yaboohday 17 deeq oo ah xaddiga $20.4 milyan. (Eeg our keydka macluumaadka liis buuxa ee deeqaha la ogolaaday.) Isugeyntaas, $300,000 muddo 36 bilood ah ayaa taageeri doonta Ururka Cilmi baarista Beeraha Qaranka (NARO) reer Ugaandha, mid kamid ah barnaamijyada iskaashiga caalamiga ah ee McKnight.
NARO waxay hagtaa dhamaan howlaha cilmi baarista ee beeraha ee wadanka Yugaandha, iyada oo howlgal lagu abuurayo laguna faafiyo teknoolojiyadda ku habboon, nabadgelyada, iyo qiimaha-ku kacaya Shaqadeeda waxay diiradda saareysaa horumarinta iyo kor u qaadista teknolojiyada iyo hal-abuurka beddela beeraha - kobcinta waxsoosaarka beeraha ee waara, tartan joogto ah, kobcinta dhaqaalaha, iyo sugnaanta cunnada, iyo ugu dambeyn, ciribtirka saboolnimada.
"Waxaan ku faraxsanahay la-hawlgalayaasheeda iyo horumarkooda abuuritaanka xalal sinnaan iyo deegaan ahaaneed oo loogu talagalay beeralayda iyo nidaamyada cunnada adduunka oo dhan," ayuu yiri guddoomiyaha guddiga McKnight Debby Landesman. "Waxay soo cusbooneysiinayaan habab lagu horumarinayo farsamada iyo nidaamyada bulshada ee beeralleyda, taasina waxay kor u qaadeysaa awoodaha bulshooyinkaan si loo yareeyo isbedelka cimilada iyadoo la dhisayo adkeysiga."
Beeraleyda waxaa loo tababaray miraha geedaha luul, daraasadda wareegga nolosha dhirta iyo sida ay u saameyso isbeddelada xilliyeed ee jawiga iyo hab-nololeedka.
McKnight wuxuu ku deeqay deeqdan Barnaamijka Cilmi Baarista Iskaashatada (CCRP), oo ka shaqeysa xaqiijinta adduunyo halka ay dhammaan ka heli karaan cunto nafaqo leh oo ay si joogto ah u soo saaraan dadka maxalliga ah. Barnaamijku wuxuu taageerayaa cilmi baarista nidaamyada beero -olajiga 10 waddan oo ku yaal qaaradda Afrika iyo Koonfurta Ameerika, halkaas oo saboolnimada iyo cunno yaraanta ay ka abuureen "dhibco kulul oo gaajo ah." Beeraleydu waxay ka mid ahaayeen waaxdii ugu horreysay ee la dareemo saameynta isbedelka deegaanka ee adduunka, iyadoo beeralleyda yar-yar ay ka mid yihiin kuwa ugu dhibka badan. Barnaamijka cilmi baarista dalaga wuxuu ka caawiyaa wax ka qabashada arrimaha cimilada degdegga ah isagoo maalgelin ku sameeya xalalka beero-teknolojiyadda, iyo, iyo beeraleyda yar-yar.
“Ujeedadeenu waa ugu dambeyntii sidii aan u taageeri lahayn nidaamyada cuntada ee u saamaxaya beeraleyda maxalliga ah inay quudiyaan qoysaskooda iyo bulshooyinka si ay ugu anfacdo dhammaan bulsho ahaan, dhaqaale ahaan, iyo deegaan ahaanba.” —JANE MALAND CADY, PhD, HALKA BARNAAMIJKA DALKA
CCRP Cinwaanku wuu is beddelaa laba siyaabood oo isku xidhan. Marka hore, barnaamijku wuxuu dhiirrigelinayaa hab si weyn uga qaybqaadasho leh, hab iskaashi ah cilmi baarista dalagga — ku tiirsanaanta beeralleyda maxalliga ah, kuwaas oo dhulkooda u ilaalin jiray sidii qarniyo ka horreeyay beeralayda, si ay ula wadaagaan qaabab kala duwan oo aqoon iyo baahiyo dhaqameed. Baadhitaanku wuxuu diiradda saarayaa xoojinta beero-nafsiga waxqabadyada - kuwaa oo kor u qaadaya waxqabadka nidaamyada beero iyagoo ku daraya mabaadi'da dabiiciga ah maaraynta beeraha.
Marka labaad, barnaamijku wuxuu wadaagayaa macluumaadka wuxuuna saameyn ku yeeshaa xirfadaha iyo hababka beeraleyda, machadyada cilmi baarista, iyo kuwa kale si loo yareeyo loona waafajiyo isbedelka cimilada, iyadoo meesha laga saarayo xirfadaha iyo awoodaha si loo abuuro xalal dabiici ah. Labadan dariiqo, CCRP waxay mudnaanta koowaad siineysaa aragtida guud ee beeraha, halkii ay diirada saari laheyd oo keliya kordhinta wax soosaarka. Wax soo saarku weli waa muhiim, laakiin kaliya marka la waafajiyo xalal waara iyo dhaqano loo siman yahay ee bulshada dhexdeeda.
Abuurista aalado quudiya qoysaska iyo ka-faa'iideysiga Cimilada iyo bulshada
Yugaandha iyo dalal kale, beeralleyda yar-yar ayaa inta badan lagu carqaladeeya dadaalkooda si ay u meelmariyaan dhaqamada xoojinta bey'adda sababta oo ah ma helaan marin u helis, sida cilmi baarisyo iyo teknolojiyad gaar ah. Beeraleyda waxay ubaahan yahiin wax ka qabasho wax ku ool ah oo maxalliga ah oo ku saabsan wax ka qabashada ka dib si ay u qaboojiso, u nadiifiso, u kala dhigto, u kaydiso, uguna xajiso waxsoosaarkooda- iyo sinnaan darrada ka dib abuurka waxay u horseedi kartaa khasaare weyn.
"Waxaan ku faraxsanahay la-hawlgalayaasheeda iyo horumarkooda abuuritaanka xalal sinnaan iyo deegaan ahaaneed oo loogu talagalay beeralayda iyo nidaamyada cuntada ee adduunka oo dhan." -LANDRIGA LANDESMAN, SIDA LAGU QAADO
Iyada oo deeqda McKnight, NARO ay ku tiirsanaan doonto shabakad cilmi baaris ay hogaamiso beeralleyda si loo garto oo loo cabbiro xulashooyinka tikniyoolajiyadda ku habboon gudaha iyo beeruhu. Baarayaasha waxay tijaabin doonaan tikniyoolajiyadan oo ay la jaan qaadi doonaan xaaladaha maxalliga ah, iyagoo ku daraya aqoonta dadka asaliga ah iyo hal-abuurka maxalliga ah. Iyaga oo yareynaya khasaaraha ka dib abuurka iyo horumarinta isku-dhafka cuntada ee nafaqada leh, mashruucu wuxuu awood u yeelan doonaa inuu hagaajiyo cunnooyinka maxalliga ah isla markaana uu horumariyo fursadaha hab-nololeedka ee beeraleyda iyo kuwa wax soosaara.
Dadka maxalliga ah iyo ururradu waa wadnaha wejigan qaab-ku-saleysan. Markii la tababarayo ardayda, beeralleyda, been abuurayaasha, hoggaamiyeyaasha maxalliga ah, iyo inbadan, mashruucu wuxuu xoojinayaa awoodda beeroleyda reer miyiga ah ee ku sii socda adeegsiga tikniyoolajiyadan kadib, hadda iyo mustaqbalka.
Mashaariicda cilmi baarista ee cilmiga beeraha sida tan midd waxay siineysaa bulshooyinka beeralleyda aaladaha ay u baahan yihiin si ay u quudiyaan qoysaskooda iyo kor ugu qaadaan hab-nololeedkooda, inta ay ilaalinayaan dhulkooda, hawadooda, iyo biyahooda muddada fog. Sababtoo ah beeraleydu waxay ka qaybqaataan oo ay la wareegaan lahaanshaha hannaanka cilmi baarista, waxay awood u leeyihiin inay ugu yeeraan aqoon caalami ah iyo mid maxalli ahba oo ay iska kaashadaan qaabab loo abuurayo bulshooyin badan oo caddaalad ah.
CCRP waxay sii wadi doontaa inay xiriirkan ka sameyso nidaamyada cuntada, jawiga, iyo bulshooyinka sinnaanta ee adduunka oo dhan. Sida Jane Maland Cady, PhD, agaasimaha barnaamijka caalamiga ah, waxay tiri: “Ujeedadeenu waa ugu dambeyntii taageerista nidaamyada cuntada ee u saamaxaya beeraleyda maxalliga ah inay quudiyaan qoysaskooda iyo bulshooyinka si ay ugu anfacdo dhammaan bulsho ahaan, dhaqaale ahaan, iyo deegaan ahaanba.”
Kulamada gobolka waxay kooxdu siinayaan fursad ay ku wadaagaan aqoonta iyo macluumaadka ayna kula qabsadaan xaaladaha maxalliga ah.
Dhibcaha Sawirka: Florence Kiyimba, NARO
Kooxaheenna Koraaya iyo Bedelka
Waqtiga McKnight, waqtigaani waa waqti isbedel firfircoon. Maaddaama aan u dhaqaaqno isbeddel xagga hoggaanka cusub, barnaamijyada, iyo qaab-dhismeedka gudaha ee la safeeyey, waxaan dooneynaa inaan kula socodsiino la-hawlgalayaashayada qiimeeya kooxda gaar ah ee aan dhisneyno. Waxa soo socdaa waa soo koobid ku saabsan cusboonaysiinta shaqaalaha ee rubuckeenna koowaad ee 2020, oo qaar ka mid ah aannu hore u wadaagnay.
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno inaan ku hawlgalnay shirkadda baarista ee Korn Ferry si ay u fuliso raadinta madaxweynahayaga xiga. Waxaan qorsheyneynaa inaan sii deyno astaanta booska toddobaadyada soo socda. Fadlan wixii su'aalo ah u soo dir McKnightSearch@KornFerry.com.
Kooxaheena barnaamijka, McKnight wuxuu soo dhaweynayaa DeAnna Cummings sida agaasimeheena cusub ee barnaamijka Farshaxaneedka oo bilaabanaya Juun 1. Waxyaalaha la soo gaabiyo waxay u imaanayaan McKnight oo ka socota Juxtaposition Arts, oo ah hay'ad waqooyiga Minneapolis ah oo ay ku nooleyd oo hogaamisay 25 sano, una adeegtey in kabadan 6,000 dhalinyaro iyo 10,000 xubno bulshada ah. Waxay sidoo kale ka shaqeysay sarkaal barnaamij barnaamij ku saabsan Xarunta Farshaxanka Gobolka ee Magaalaweynta waxayna maamule sare u ahayd Council on Black Minnesotaotans (oo hadda loo yaqaan Council for Minnesotaotans of African Heritage).
Bishii Febraayo, waxaan soo dhoweynay Phoebe Larson oo ah maareeyaha isgaarsiinta cusub. Markii hore, Larson waxay u shaqeysay agaasimaha isgaarsiinta ee maktabada dadwaynaha ee Saint Paul, halkaas oo ay ku hogaamisay istiraatiijiyad isgaarsiineed dhowr hindise oo muhiim ah - oo ay kujirto baabi'inta ganaaxa maktabadda goor dambe, isbadal siyaasadeed oo lagu casuumay 42,000 oo qof oo watay kaarar horey loo xanibay maktabada.
Waxaan sidoo kale bedelnay dhowr doorar shaqaale iyo cinwaanno shaqo. Barnaamijkeena V&EC ee isbeddelaya, Erin Imon Gavin waxaa loo magacaabay agaasinka isdhaxgalka barnaamijka iyo sarkaalka barnaamijka; Sarah Hernandez, sarkaalka barnaamijka; iyo Eric Muschler, sarkaalka barnaamijka. Latosha Cox waa maamulaha barnaamijka barnaamijka, oo taakuleyn doona labadaba barnaamijyada Fanka iyo V&EC, Renee Richie hadda waa barnaamij waxayna ku deeqeysaa kaaliyaha V&EC.
Wararka kale ee kooxda, Dorothy Wickens waxaa loo dalacsiiyay deeq iyo maamulaha macluumaadka. Jan Peterson (Deeqda kale), Sarah “Sam” Marquardt (Cimilada Dhexe & Tamarta), iyo Walter Abrego (International) hada waa barnaamij iyo deeq bixiyayaal.
Sidii hore loo shaaciyey, Lee Sheehy, oo ah agaasimaha barnaamijka Gobolka & Bulshooyinka, wuxuu ka tagi doonaa kaalintiisa dhammaadka Luulyo, Kristen Marx waxay ka tagtay doorkeedii maamule barnaamijka Farshaxanka dhammaadkii Febraayo. Intaa waxaa sii dheer, Jody Speer, agaasimaha teknolojiyada macluumaadka, wuxuu ka tagi doonaa Aasaaska bartamaha Abriil si uu u raadsado fursad cusub. Shantii sano ee ay joogtay McKnight, Speer waxay gacan weyn ka geysatay kor u qaadista nidaamyadeena tikniyoolajiyadda si aan si fiican ugu qalabaysanno si aan u horumarinno himiladeenna. Waxaan u rajeynaynaa wanaag.
Ururinta caddayntu waa dadaal ballaadhan
By Jane Maland Cady Maarso 2022
Sida Shabakadda Cilmi-baarista Beeralayda ay Quudinayaan Mustaqbalka
McKnight waxa uu Beyene Gessesse ku soo dhaweeyay Madaxa Barnaamijyada Caalamiga ah
Astaamaha Beyene Gessesse Noofambar 2021